I-Apple ikhupha iXcode 9.0 ngokusesikweni | Ndisuka mac
IApple ikhupha ngokusemthethweni iXcode 9.0
Kwiveki emva kweKeynote apho kuboniswe khona iflegi entsha yohlobo, iApple ngoku iqala ngohlobo lwayo lweqonga lophuhliso. I-Xcode 9.0, ekugqibeleni, sele ikwisigaba sayo sokugqibela kwaye ibandakanya inkxaso ye-Swift 4, iOS 11, watchOS 4, tvOS 11 kunye neMacOS High Sierra 10.13.
Kubandakanya enye Ibhetri yokuphuculwa kunye neempawu eziza kubonelela ngabaphuhlisi abayisebenzisayo imeko enomdla ngakumbi kwaye emnandi ukwenza usetyenziso olutsha.
Okokugqibela uhlaziyo olukhulu kwinkqubo ekhethwa ngabaphuhlisi besicelo seMac, i-iPhone, i-iPad, iApple TV kunye neApple Watch. I-Xcode 9.0 ibonelela abaphuhlisi ngokuhamba komsebenzi ngokudibeneyo kuyilo, ukufaka iikhowudi, ukuvavanya, kunye nokulungisa isiphene somlawuli kunye nendawo yomsebenzisi.
Kwakhona, i-Xcode IDE edityaniswe nolwimi lwenkqubo ye-Swift yenza ukuba ukuphuhliswa kwezicelo kube lula kwaye kumnandi ngakumbi kunangaphambili. Yintoni entsha kolu hlobo yile:
- «Ukuphinda wenze kwakhona» kuququzelela ukuguqulwa kolwakhiwo lweekhowudi zeSwift, zeNjongo-C, zeC kunye ne-C ++.
-Umhleli wekhowudi ukhawuleze ngokukhawuleza kwaye uyaphendula kwaye wongeza inkxaso yemveli kwiMarkdown syntax.
-Lungisa-isebenzise izongezo ezininzi kwikhowudi yakho ngonqakrazo olunye, kwaye unokongeza iindlela ezifanelekileyo zenkqubo.
Isikhangeli esitsha soLawulo loMthombo kunye neeakhawunti zeGitHub ezakhelweyo zenza kube lula ukulawula ikhowudi kwiqela liphela.
-Ukufakwa ngaphandle kwamacingo kunye nokusombulula ukungasebenzi kweapps ze-iOS kunye ne-tvOS ngoku zinokwenziwa kwinethiwekhi.
-I-simulator iziphatha ngakumbi njengesixhobo sokwenyani kwaye inokulinganisa izixhobo ezininzi ngaxeshanye.
-Iitemplate zemidlalo ye-iOS zenza amaxwebhu asebenza kwiXcode nakwiSwift Playgrounds kwi-iPad.
-Fumana isikhangeli ngokukhawuleza kwaye iziphumo ziboniswa kwangoko.
Isikhangeli seprojekthi sigcina ngokuzenzekelayo iifayile kunye namaqela ngokuvumelanisa noMfumani kunye nolawulo lomthombo.
-Iseva yeXcode ayisasifuni iseva yeMacOS kwaye inokuqwalaselwa ngokupheleleyo kukhetho lweXcode.
Kwaye ezinye iindaba ezininzi. Ungazijonga kwaye ukhuphele isoftware entsha kwiVenkile ye-Mac okanye ngale khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IApple ikhupha ngokusemthethweni iXcode 9.0
UPhilips ubhengeza iimonitha ezimbini ezitsha ngesisombululo se-2k kunye ne-4k
IFreeter Pro kunye neAudioConverter, ngoku iyathengiswa ngeMac